Archive du 20180604
Herisetra sy asan-jiolahy Nisy naka an-keriny ny zanak’i Chandarana
Nisy naka an-keriny teny Andakana-Ambohidratrimo amin’iny lalam-pirenena faha-4 mihazo an’i Mahajanga, akaikin’ny toeram-pilalaovana Golf iny ny teratany Karana antsoina hoe Rishi Chandarana omaly, izay zanaka lahin’ny tompon’ny hotely lehibe Le Grand Mellis etsy Tsaralalana.
Jeneraly Rasolosoa Dolin Tsara toerana ho praiminisitra ?
Eo amin’ny fanendrena praiminisitra no tena ifantohan’ny adihevitra sy ny fifandresen-dahatra tato anatin’ny herinandro latsaka kely izao.
Gerard Noel Ramamimampionona “Tsy avy amin`ny CFM ny korontana teny amin’ny CCI”
Nisavorovoro sy nifanjevo ireo mpanao politika nifamory teny amin`ny CCI Ivato ny zoma lasa teo. Nambaran`ireo mpanao politika fa samy hafa ny hevitra niainga tany amin`ny asam-baomiera roa natao tamin`ny fivoriana.
Hery Rajaonarimampianina Mihevi-tena ho nanao ny mety
Fony mbola notoriana ho nandika lalàmpanorenana sy tsy nahatafatsangana ny fitsarana avo na HCJ ara-potoana no efa tsy nahatsapa tena hametra-pialana mihitsy ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina.
Famahana ny krizy Ho fantatra anio ny anaran’ny Praiminisitra…
Eo amin’ny fanendrena praiminisitra no tena ifantohan’ny adihevitra sy ny fifandresen-dahatra tato anatin’ny herinandro latsaka kely izao. Efa mazava ny an’ny depiote ho an’ny fanovana fa dia mitovy hevitra ny TIM sy MAPAR amin’izay praiminisitra ho avy eo.
Praiminisitra avy amin’ny MAPAR Tsy olana aminay, hoy ny TIM
Ny fialan’ireo nangatahantsika hiala hatramin’ny farany hatrany no fetrany, hoy ny depioten’ny fanovana nandritra ny hetsika teny amin’ny kianjan’ny 13 mey ny sabotsy 2 jona teo.
Mahafaly Solonandrasana Hametra-pialana anio
Hanao valandresaka amin’ny mpanao gazety anio alatsinainy maraina amin’ny 7 ora sy fahefany eny amin’ny lapan’i Mahazoarivo, aorian’ny fananganan-tsaina ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Fikambanana Vahoaka ihany Hitolona mandra-pahatonga ny fiovana
Manoloana ny fivoaran’ny toe-draharaham-pirenena dia nampiaka-peo tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey Analakely indray ny sabotsy teo ny fikambanana Vahoaka ihany, notarihin’ny filohany, Bruno Ravelonanosy.
Tolona ho an’ny fanovana Tonga ihany koa ny mpitatitra
Tonga masiaka araka ny fomba fiteny ary nanatevina ny tolona ho an’ny fanovana teny amin’ny kianjan’ny 13 mey ny sabotsy lasa teo ny fianakaviamben’ny mpitatitra.
Miala teo amin’izay ry Jean isany fa tsss..!! Angaha moa ianareo irery no mahay midrikina sy mitrerona rehefa lagy ? Tafahoatra ilay ataonareo e !
Top Radio 102.8 FM Hanomboka anio ny Bemiray amin’ny endriny vaovao
Hiova endrika manomboka anio alatsinainy 4 jona ny fandaharana vao maraina Bemiray amin’ny onjampeo Top Radio 102.8 FM. Fanatsarana no natao mba hanomezana fahafaham-po hatrany ny mpihaino sy hanakaikezana kokoa sady hanampiana ny mpiray tanindrazana.
Kaominina Alakamisy Fenoarivo Nahazo toeram-pivarotana akoho gasy sy legioma
Miroso hatrany ny sa fampandrosoana iantsorohan’ny Ben’ny tanàna Rakotobe Jean Christian na i Boni ao anatin’ny kaominina Alakamisy Fenoarivo izay iadidiany.
Ny omby sy ny vintan’olombelona Misy fifandraisany …
Anisan’ny biby iray manan-danja eo amin’ny fiainan’ny Malagasy ny omby. Ankoatra ny maha sakafo fihinana azy izay malaza hatrany isaky ny misy fety lehibe dia misy fifandraisany amin’ny vintan’olombelona ihany koa izy ireny ka tsy tokony ho ompiompiana fahatany, hoy’Atoa Victorio Andriamihanta.
Maizim-pito i Mananara Avaratra Nipoaka ny milina mpamokatra herinaratra
Miaina delestazy goavana nanomboka ny sabotsy teo ny mponina ao Mananara Avaratra.
Fiangonana Loterana Malagasy Mankahery hatrany ny mpino hiorina amin’ny finoana
Nofaranana teny Mahamasina ny alahady 27 mey teo teny Mahamasina ny jobily faha-150 taonan’ny Fiangonana Loteranina Malagasy na ny FLM.
Cosafa Cup 2018 Tafita amin’ny lalao manasa-dalana ny Barea
Tafita amin’ny dingan’ny manasa-dalana amin’ny fifaninana Cosafa Cup 2018 ny Barea Malagasy rehefa nandavo nyBafana BafanaAfrika Atsimo tao amin’ny kianja Peter Mokaba Stadium tamin’nyTirs au but 4-3 omaly alahady 03 jona raha samy tsy nisy nitoko ny roa tonta teo amin’ny fotoana ara-dalàna.
Fivoriamben’ny FMF Nahazo fankatoavana i Doda Andriamiasasoa
Nanatanteraka AGO na Fivoriambe ara-potoana 2017 sy AGE na Fivoriambe tsy ara-potoana niaraka, teny Mandrosoa Ivato tamin’ny sabotsy 02 jona 2018, ny FMF na Federasiona Malagasin’ny Baolina Kitra niaraka tamin’ireo filohana ligim-paritry ny baolina kitra sy Sg-ny miisa 22 manerana ny nosy eo amin’ity taranja ity ary natrehan’ny solontenan’ny ministeran’ny fanatanjahantena mpanamarina ny fanarahan-dalàna rehetra sy ny solontenan’ny Com. Rehefa notaterin’ny filohan’ny FMF,
Rugby Association Les As 38 3Fb, Tfma, Tfa ary Ftm no hiatrika ny famaranana
Nikarakara lalao rugby teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka omaly alahady 03 jona 2018 ny fikambanana mpikarakara hetsika ara-javakanto ny “Association Les As 38” tarihan’ny filohany Herisoa Philippe Olivier.
Tsy misy fanafany
Miala aina ny fanjakana Rajaonarimampianina, saingy toa mbola miezaka mitsipatsipaka mitady izay fomba rehetra hahitana rirany kely sisa.
Fianarana ho matihanina amin’ny fahandroana sakafo Mbola vitsy eto Madagasikara
Nifarana omaly alahady 3 jona ny hetsika International Fair Tourism Madagascar (ITM) andiany fahafito notontosaina tetsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka.
Fampianarana Hikatona ny sekolim-panjakana rehetra anio
Miha mafy hatrany ny fitakian`ny mpanabe manerana ny nosy ary nanamafy izany ny firaisankinan`ny sehatry ny fampianarana izay nahitana mpampianatra, filohan`ny CISCO, lehiben`ny DREN ny asabotsy lasa teo. Fitakiana izay miompana amin`ny famaritana ny fampitoviana mari-karama sy tambin-karama tokony hositrahan`izy ireo.
QMM Tolagnaro 4 andro izao no tsy nihodina intsony ny ozinina
Efa ho 4 andro izao no tsy nihodina intsony ny ozinin’ny QMM mpitrandraka fasimainty ao Tolagnaro satria tsy afaka namonjy ny toeram-piasana ny mpiasa.
NIFONA I HERY RAHARISAINA
Nifona ampahibemaso taorian’ny fihetsika tsy voahevitra nataony teny amin’ny CCI Ivato ilay mpanao politika HeryRaharisaina izay nifamaly sy nifampisintona micro nandritra ny fivoriana an-tampony nokarakarain’ny Cfm.
Tanjon’ny CNaPS amin’ny 2022 Ampiakarina 15% ireo mahazo fiahiana ara-tsosialy
Eto Madagasikara dia mbola vitsy dia vitsy ny mpiasa misitraka ny fiahiana ara-tsosialy satria dia eo ho eo amin’ny 7 % hatramin’ny 10% eo izany. Ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahana ara-tsosialy (CNaPS) dia tsy mitsahatra ny manao ezaka hoentina hanatsarana ny fiainan’ny mpiasa eto amin’nyfirenena.